अन्य सम्पर्कहरू (TOC), कुल गोपनीयतासँग तपाईंको एजेन्डाको विकल्प आईफोन समाचार
अन्य सम्पर्कहरू (TOC), कुल गोपनीयतासँग तपाईंको एजेन्डाको विकल्प
रुबेन गेलार्डो | | आईफोन अनुप्रयोगहरू
हामी जडित युगमा छौं। सबै हाम्रो क्लाउडमा डाटा र कुनै पनि समय यसलाई पहुँच गर्न सक्षम हुनुहोस्। अझ बढी, प्रत्येक चोटि जब हामी हाम्रो मोबाइलमा नयाँ अनुप्रयोग स्थापना गर्दछौं, तिनीहरूले निश्चित रूपमा हामीलाई फोटोहरू र सम्पर्कहरूको पहुँचको लागि सोध्ने छन्। त्यसकारण, जब हामी यी सर्तहरू स्वीकार गर्दछौं, हामी ग्रहण गर्दैछौं - र उजागर गर्दैछौं - हाम्रो एजेन्डामा सबै व्यक्तिगत डाटा।
ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, आदि हामी तपाईलाई भनेको के केहि उदाहरणहरू छन्। पछि, पक्कै पनि यो आउँछ जब हामीले अफसोस गर्छौं कि कर्तव्यमा रहेको कम्पनीले कम्प्युटरको हमला गरेको छ र लाखौं खाताहरू खोलिएका छन्। हालको दुनिया मा यो नजरबाट र यी पहुँचहरु मा बाधा राख्न चाहान्छ, "अन्य सम्पर्क (TOC)", एक अनुप्रयोग जुन आउँछ हाम्रो सम्पर्क पुस्तकको विकल्प र यसले यी अनुमतिहरूमा बाधा राख्छ। यो एक सरल, कम से कम देखीएको छ र केहि विकल्पहरु छन्। तर त्यो के हो: एजेन्डा राख्नु सबैसँग पूर्ण रूपमा सम्बन्धित छैन डाटा साझेदारी गर्न बाध्यकारी हुन्छ। एक नजर हेरौं
1 TOC: ती सम्पर्कहरूको लागि वैकल्पिक एजेन्डा जुन तपाईं यती अनलाइन घुसपैठबाट बचाउन चाहानुहुन्छ
2 टच आईडी वा अनुहार आईडी र डुअल मोडको साथ पहुँच
3 सम्पादकको विचार र अनुप्रयोग डाउनलोड
TOC: ती सम्पर्कहरूको लागि वैकल्पिक एजेन्डा जुन तपाईं यती अनलाइन घुसपैठबाट बचाउन चाहानुहुन्छ
यसको मतलब यो होइन कि तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरूमा हाम्रा सम्पर्कहरूको पहुँच दिन सबै नकारात्मक छ। तर, प्रत्येक केसको गोपनीयता तपाईको निर्णय भन्दा राम्रो हुन्छ तपाईको प्राथमिकता बाहिरकालाई होइन। साथै, हामीले किन अन्य व्यक्तिको डाटाको बारेमा भन्नुपर्दछ? तसर्थ, "अन्य कन्ट्याकट्स (TOC)" जन्मिएको थियो, न्यूनतम डिजाइन र प्रयोग गर्न धेरै सजिलोको साथ एक अनुप्रयोग.
यो डाउनलोड हुने बित्तिकै अनुप्रयोग आईफोनमा, तपाईं नयाँ सम्पर्कहरू प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ (दुबै चयन र तपाईंको सम्पूर्ण क्यालेन्डर)। यो हुन सक्छ ती कार्य सम्पर्कहरूको लागि राम्रो विकल्प कि यो सुरक्षित राख्न राम्रो छ र अन्य कम्पनीहरु (फेसबुक वा गुगल) को पहुँच छैन।
भरिने फिल्डहरूमा हामीसँग नाम, थर, ईमेल ठेगाना, कम्पनी जसको लागि तपाईं काम गर्नुहुन्छ र टेलिफोन नम्बर राख्ने सम्भावना हुनेछ। digit अंकको संख्याका लागि मात्र काम गर्दछ)। थप रूपमा, अन्तिम फिल्ड त्यो सम्पर्कको बारेमा टिप्पणीहरू थप्न प्रयोग गरिनेछ।
टच आईडी वा अनुहार आईडी र डुअल मोडको साथ पहुँच
TOC को लागि उपलब्ध केहि कन्फिगरेसन विकल्पहरू मध्ये, हामी दुई प्रस्तुतीकरण मोडहरू बीच छनौट गर्न सक्ने सम्भावना हुनेछ: गाढा मोड वा सामान्य मोड। यहाँ प्रत्येक उपयोगकर्ता को स्वाद मा निर्भर गर्दछ।
यसै बीच, मैले यस अनुप्रयोगको बारेमा मलाई सबैभन्दा मन पराउने चीजहरू मध्ये एक यो हो कि यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, प्रत्येक व्यक्ति जसले तपाईंको आईफोनमा पहुँच राख्छ उसले सम्पर्कहरूको पूर्ण सूची पहुँच गर्न सक्षम हुनेछ। किन? किनभने विकासकर्ताहरूले एउटा अर्को बाधा राखेका छन्: टच आईडी वा अनुहार आईडी प्रयोगको साथ अनुप्रयोग अनलक.
त्यस्तै, TOC पनि तपाईंलाई कलर आईडी प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ भित्र भण्डारण भएका सम्पर्कहरूको सबै व्यक्तिगत डेटा संरक्षण गर्दै।
सम्पादकको विचार र अनुप्रयोग डाउनलोड
सायद राम्रो स्वाद जुन यो अनुप्रयोगले हामीलाई छोडिदिएको छ धन्यवाद छ यसको प्रयोगको सहजता र यसको न्यूनतम लुक। आईफोनको वैकल्पिक एजेन्डा हुनका लागि तर अत्यन्तै उच्च गोपनीयताको साथ यसले कुनै पनि कुराको प्रिटेन्टेसनहरू राख्दैन।
यसको प्रयोग र सेटिंग्स ह्यान्डल गर्न सजिलो छ। सबै कुरा धेरै सहज छ। अरु के छ त, टच आईडी वा अनुहार आईडी जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग मार्फत त्यो अतिरिक्त गोपनीयता धेरै सफल देखिन्छ।। एक भन्दा बढी व्यक्तिको पहुँच हाम्रो आईफोनमा हुन सक्दछ। र हुनसक्छ केही पेशेवर सम्पर्कहरू - वा होईन - राम्रोसँग लक र कुञ्जी भित्र राखिन्छ।
यो अन्तिम पक्ष हो जहाँ अन्य सम्पर्कहरू (TOC) पहिले भन्दा बढी अर्थ बनाउँदछ: एक पेशेवर प्रयोग सबैभन्दा आदर्श हुनेछ। अब, यदि तपाइँ ती मध्ये एक हुन जो गोपनीयता यस सन्दर्भमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो, यो अनुप्रयोग तपाइँको वैकल्पिक हुन सक्छ।
अन्तमा, यो हामीलाई राम्रो विचार लाग्दछ कि विकासकर्ताहरूले सम्भावना समावेश गरेको छ कलर आईडीमा, हामीले भित्र भण्डार गरेका सम्पर्कहरू पनि कलमा देखा पर्दछन्। जस्तो कि हामीलाई यो पनि राम्रो लाग्यो जब एक सम्पर्कको ईमेल थिच्दा, «Mail» अनुप्रयोग सुरूवात हुन्छ 'विशिष्ट' प्रतिलिपि र टाँस्नुहोस् 'को सहारा लिनबाट जोगिनका लागि।। अब, यदि त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन हामी पछिको संस्करणहरूमा हेर्न चाहन्छौं भने, यो हाम्रो कार्यसूचीबाट सम्पर्कहरू निर्यात गर्न सक्षम हुनेछ सम्पूर्ण प्रक्रिया आफैं नै नगरीकन।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन अनुप्रयोगहरू » अन्य सम्पर्कहरू (TOC), कुल गोपनीयतासँग तपाईंको एजेन्डाको विकल्प
त्यो नयाँ आईफोनको चार्ज प्रणालीको कती छिटो हो